Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina : Handaniana volam-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaZafy Albert, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina : Handaniana volam-bahoaka
09/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hofidiana tsy ho ela izay ho filohan’ny komitin’ny Fampihavanam-pirenena, ary efa fantatra ireo manana fahavononana ho amin’izany andraikitra izany. Nijoro ho raiamandreny tokoa ny filoha Hery Rajaonarimampianina ka nametraka ny Fampihavanam-pirenena no isan’ny laharam-pahamehana. Mbola iantefan’ny tsikera sy ny fanakianana ihany anefa ny fitondrana eo anatrehan’izany fandeferana izany ho fitsinjovana ny tombontsoa ambonin’ny firenena.
Tsy nisy afa-tsy fanonganam-panjakana no nanamarika ny taona 1991 hatramin’ny taona 2009, izany hoe, 18 taona be izao no very tamin’ny fanonganana sy fandravana ary fandrobana fotsiny. Ny profesora Zafy Albert nanongana ny amiraly Didier Ratsiraka tamin’ny 1991, avy mba naongan’ny amiraly ihany koa tamin’ny 1995, dia mba naongan’i Marc Ravalomanana koa ny amiraly tamin’ny 2002 dia notohizan’i Andry Rajoelina izany fanonganana izany ny taona 2009 niarahany tamin’ny amiraly Didier Ratsiraka. Ireo olona tsy nanao afa-tsy ny nanongam-panjakana ireo no andaniana volam-bahoaka ankehitriny, tsy vitan’izany fa mbola be tsikera sy fanakianana lava. Mba azon’izy ireo an-tsaina ve ny fahavoazan’ny firenena very 18 taona be izao?
Nizaka ny mafy tokoa ny vahoaka nandritra io 18 taona nifanonganan’izy efadahy ireo. Nandriaka nanerana ny Faritany enina ny rà, fandrobana tsy roa aman-tany, sns. Izany no nanamarika ny fiainam-pirenena noho ny nataon’izy efadahy andaniana volam-bahoaka amin’ny fampihavanana amin’izao fotoana. Tsy misy maha ratsy ny fampihavanana, olon’ny fihavanana rahateo koa ny filoha Hery Rajaonarimampianina kanefa tokony hahatsapa tena mihitsy ireto mpitondra teo aloha ireto fa tsy izy ireo indray no sanatria “gisa mangala-ketsa” eto. Izany Marc Ravalomanana izany moa, dia ny tena no menatra araka ilay fomba fitenenana!